Nagarik News - छोरी स्याहार्दै रञ्जिता
फिल्म 'गोर्खा पल्टन'बाट हिरोइन बनेकी र छोटो समयमै डेढ सयभन्दा बढी भिडियोमा अभिनय गरेकी रञ्जिता गुरुङ अचेल गुमनाम छिन्। विगत केही महिनादेखि कला क्षेत्रबाट पर बसेकी उनी यतिबेला भने छोरी स्याहार्न व्यस्त छिन्।
दुई हप्ताअघि मात्रै छोरी जन्माएकी उनले फोनमा भनिन्, 'करिअर र घरबारलाई उत्तिकै माया गर्नुपर्योन नि।' फिल्ममा अभिनय गर्नुअघि नै विवाह गरेकी उनले करिअरमा सफलता प्राप्त गर्दाभन्दा बढी खुशी छोरी पाउँदा भएको बताइन्। चौबीस वर्षकै उमेरमा आमा बनेकी उनले छोरी हुर्काएपछि फेरि कला क्षेत्रमा फर्किने सम्भावना रहेको बताइन्। पछिल्लो समय उनी बुटिक व्यवसायमा पनि लागेकी छिन्।
गीतले जुराएको गृहस्थी
रामचन्द्र काफ्ले–जुनु रिजाल दम्पती संगीत पेसामा आबद्ध छ। रामचन्द्रका 'हिउँ चुलीमा घाम लाग्यो', 'लाठी चार्ज', 'वार्ता गराइदेऊ'लगायत दर्जनौँ गीत हिट छन्। त्यसै गरी जुनुले गाएका 'कसले सुरुवात गर्यो ', 'हिमाललाई...
'हिरो बन्न कम्ती धैर्य गरिएन!'
हिरो बन्ने सपना देख्न थालेको झन्डै २० वर्षपछि श्याम अर्याल सफल भएका छन्। उनले हिरोका रूपमा 'हिरो'कै भूमिकामा अभिनय गरेको फिल्म 'प्रोड्युसर' अर्को हप्ता रिलिज हुँदै छ। रंगकर्मी, मोडल, आरजे...
नयाँ फेशन नयाँ दुर्व्यसन
उहिले बूढापाकाको अम्मल थियो हुक्का। पाहुनाको सत्कारमा एक चिलिम तमाखु टक्य्राउने चलन पनि थियो। अहिले हुक्का फेशन भएको छ। शहरबजारका रेस्टुरेन्टहरूले तन्नेरीलाई विभिन्न सुगन्धका हुक्का उपलब्ध गराएका छन्।
नेपाली जनताका नजरमा प्रहरीको छवि खासै गतिलो छैन। यस्तो कटु सत्यका बीच गुलाब दिवसका दिन युवायुवतीले एक प्रहरी अधिकृतलाई १५ सय गुलाब दिए। उनी थिए, एसएसपी रमेश खरेल। यत्तिका तन्नेरीले...
'धन्न, आइटम क्विन बनिनँ!'
गायिका मौसमी गुरुङको गायन पनि मौसमजस्तै छ। कहिले उनी रिमिक्समा भुल्छिन्, कहिले जिंगलमा झुल्छिन्, कहिले आइटम सङमा अड्किन्छिन्। 'परेलीमा छौ कि कसो', 'चोरेर लग्यो यो मन', 'लाउन त लाइदिएँ माया...